Posted by admin on May 05 2014 19:19:21
Qilaaf xoogan oo caawa laga dareemayo mudanayaasha baarlamaanka oo u muuqda wadadii ay ku burburi lahaayeen iney cagta saareen kaasi oo ka dhashay...... Wararka caawa.
HS:- Wararka naga soo gaaraya caasimada Soomaaliya ee Mogdishu oo ay ku sugan yahiin mudanayaasha ugu baarlamaanka ayaa sheegaya in ay muran xoogan ka dhax taagan yahay caawa kedib markii ay hal mar ku waabariisteen koox madaxweynaha Soomaaliya ka codsanaya inuu is casilo.
Qaar ka mid ah mudanayaasha oo ay kalsooni ka muuqatay ayaa sheegay in uu mashruucaan ahaa mid lagu tijaabinayo mudanayaasha si dalka qalqal loo ghaliyo laakinse waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha Soomaaliya doorasho ayuu ku yimid 50 Soomaali ah ayuuna xilkaan ka dhex qaaday shaqsiga isaga bedelayana doorashu ayuu 2016 uga qaadayaa, hadiise fowdo la doonayo waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa inuusan jirin baarlamaan danta dalka isku aragti ka ah sidaasi dareedeed halkii la xag xagan lahaa madaxda ugu sareysa baarlamaanka ayaaba dib u eegid u baahan ayuu yiri mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo aanu caawa xili danbe la xariirnay kana mid ah mudanayaasha tirada yar ee lagu tuhmayo dal jaceylka.
Laakinse marka xalada dhinaca kale laga eego xitaa mudanayaashii fikirka mooshinka keenay qaar ayaa laga soo xigtay iyagoo leh madaxweynaha mooshin kama keenin ee codsi ayey naga aheyd taasi oo muujineysa in ay arimahan yahiin kuwo dalka dibadiisa laga hagayo.
Sikastaba shaki kuma jiro in uu baarlamaanka hada jiro bur bur xoogan qarka u saaran yahay maadaama ay qaarkood sabab la,aan doonayaan iney burburiyaan dowladii awalba la daalaa dhaceysay hagardaamo shisheeye iyagoo aan dalka wax xal ah u heyn amaba aan isku mashquulineyn ka hadlida ciidamada shisheeye ee dalka jooga dhawrkii biloodba keena mooshin ay dhaqaalo ku helaan wadankana dib u dhac iyo fowdo ku geliyaan.
Hadaba inagoonan ka hordhaceyn maalmaha soo socoda hadii uusan gudoomiyaha baarlamaanka oo isaga qudhiisa mooshin ka dhan ah diyaar yahay fowdadaan ka hortagin dhib la,aan ayuu isagana daaqada ka bixi doonaa wdankuna sidaas ayuu beylah ku noqon doonaa fursado badan oo hada muuqdana ku lumin doonaa ayuu yiri xildhibankan aanu caawa jaaniska u helnay.
Isku soo duuboo waa wax iska caadi ah maadaama aysan shacabku soo dooran mudanayaasha hada jira in maalinba kaarto cusub la yimaadaan qaarkood si ay howlaha xukumada horyaala markasta u carqaladeeyaan markiiba ay arkaan waxoogaa horumar ah oo ka soo muuqda dalka siiba caasimada Soomaaliya.
La soco burburka xoogan ee ku soo wajahanm baarlamaankii labada sano oo kaliya jiray.